» चैत ६ देखि सिंगटी हाइड्रोको २९ करोडको आईपीओ आउँदै
२०७८ कार्तिक ०३, बुधबार
चैत ६ देखि सिंगटी हाइड्रोको २९ करोडको आईपीओ आउँदै
२०७७ फाल्गुन २१, शुक्रबार ०९:३६
काठमाडौं । चैत ६ गतेदेखि सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको आईपीओ निष्काशन हुने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधरणका लागि २९ करोड रुपैयाँ बराबरको २६ लाख ९७ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
कुल निष्काशनमध्ये २ प्रतिशतले हुने ५८ हजार कित्ता कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशतले हुने एक लाख ४५ हजार कित्ता सामुहिक लगानीकोषहरुका लागि छुट्याएको छ । बाँकी रहेको २६ लाख ९७ हजार कित्ता शेयर सर्वसाधरणलाई वितरण गरिनेछ ।
कम्पनीले यसअघि आयोजना स्थल दोलखा जिल्लाको अति प्रभावित क्षेत्र बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुका १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ बिक्री गरि बाँडफाँट समेत गरिसकेको छ ।
आईपीओमा चैत ६ गतेदेखि १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । मेगा क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको आईपीओमा न्युनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिन्छ ।
सिंगटी हाइड्रोपावरले दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–२ बाबरे र विगू–५ चिलंखामा पर्ने सोरुङ खोलामा बाँध बाँधेर २५ मेगावट क्षमताको सिंगटी हाइड्रोपावर आयोजना निमार्ण गरिरहेको छ । चार अर्ब ३३ करोड लगानीमध्ये आयोजनामा सिभिल बैंकको नेतृत्वमा १० वटा वाणिज्य बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बाहेक सबै वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै, कसको कतिले घट्ला ? (सूची सहित)
माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिन बीमा ऐन नै बाधक
यी बैंकले आजै सार्वजनिक गर्दैछन् परिमार्जित ब्याजदर
२४ घण्टा भित्र ब्याजदर परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन, ‘१० प्रतिशत बढीले हेरफेर नगर्नु’
३ महिनामै वाणिज्य बैंकहरुले बढाए २ सय ७७ अर्ब रूपैयाँ कर्जा, निक्षेपभन्दा ४ गुणा बढी पैसा कहाँ गयो ?
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर चाँडै काम हुने व्यवस्था गरिँदै, बोलपत्रमा आवेदन दिने समय १० दिन घट्ने
राष्ट्र बैंकको कैंचीः बैंकहरूले ३ दिनमै हेरफेर गरे निक्षेपको ब्याजदर, अघिकांशको एउटै (सूचीसहित)
नेपाल बंगलादेश बैंकको परिमार्जित ब्याजदर सार्वजनिक, व्यक्तिगत र संस्थागतमा कति ?
राष्ट्र बैंकको कैंचीमा अरु बैंकको ब्याजदर घट्दा नबिलको बढ्यो, कारण यस्तो !
सेञ्चुरीले अधिकतम ९.३६ प्रतिशत ब्याज दिने, कुन निक्षेपमा कति दर पाइन्छ ?
माछापुच्छ्रे बैंकले सार्वजनिक गर्यो परिमार्जित ब्याजदर, व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपमा अब कति ?
सिद्धार्थको अधिकतम ब्याजदर ८.३६ कायम, यस्तो छ घटाइएको नयाँ रेट
सिटिजन्स बैंकले सार्वजनिक गर्यो निक्षेपको परिमार्जित ब्याजदर, अब कति ?
कुमारी बैंकले ३ दिनमै घटायो निक्षेपको ब्याजदर, परिमार्जित ब्याजदर कति ?
‘सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउँछन्, अब कडा नियमन पनि हुन्छ’